Sintomy ny takelaka WhatsApp ho an'ny Android, ahoana no hanaovana azy? | Androidsis
Rehefa tonga any an-trano izy ireo dia tsy vitsy ny mandao ny telefaona finday ary mitily amin'ny takelaka. Na izany aza, miatrika vato misakana isika, WhatsApp ho an'ny takelaka Tsy dia malaza loatra araka ny noeritreretinay azy io, ary na dia misy aza ny safidy hafa efa nipoitra rehefa nandeha ny fotoana dia tsy maintsy manana fahalalana faran'izay kely ianao mba hanananao WhatsApp ho an'ny takelaka Android. Ny malaza indrindra dia ny takelaka an'ny Samsung Koreana, izany no antony misintona WhatsApp ho an'ny takelaka Samsung Tsy tokony ho sarotra loatra izany, tianay haseho anao ny fomba hanaovana azy.
Nanjary nalaza ny takelaka rehefa nandeha ny fotoana, nanomboka tamin'ny nahatongavan'izy ireo dia niova ny fomba fifandraisantsika amin'ny efijery. Na izany aza, ao anatin'ny ora vitsy izy ireo, ny fanitarana tsikelikely ny efijery an'ny finday avo lenta dia nahatonga ny mpampiasa maro tsy hahita dikany firy amin'ny takelaka. Na izany aza, ny habaky ny mpampiasa mbola manana sasany ary manohy manana azy io ho safidy fialamboly ary handany atiny ao an-trano dia tena lehibe. Angamba izany no tsy misy mpanamboatra finday avo lenta izay tsy manana takelaka iray na maromaro eo amin'ireo laharany, ka hasehonay anao avy eo ny fomba fametrahana WhatsApp amin'ny takelaka Android.
1 Sintomy maimaim-poana ny WhatsApp ho an'ny Tablet
2 Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny takelaka Wifi tsy misy SIM
3 Ahoana ny fomba hananana WhatsApp amin'ny findainao sy ny takelaka miaraka aminao
Sintomy maimaim-poana ny WhatsApp ho an'ny Tablet
Maimaimpoana i WhatsApp, ka afaka manao azy mora foana amin'ny WhatsApp isika. Raha ny Android dia manana tombony maro ny rafitra misokatra azy noho izany dia mora toy ny mankanesa any amin'ny tranonkala WhatsApp ofisialy ary sintomy ny .apk WhatsApp hametraka izany amin'ny takelaka misy antsika. Na dia mety tsy ho lavorary aza ny fanapahan-kevitra, arakaraka ny haben'ny takelaka ampiasainay, dia hihazonana ireo fiasa fototra. Ny ankamaroan'ny takelaka dia tsy hamela antsika hisintona WhatsApp avy amin'ny Google Play Store, noho izany, amin'ity indray mitoraka ity ny safidy mety indrindra dia ny tranokala WhatsApp ofisialy, ho fanampin'izany, noho izany dia maka antoka izahay fa misintona ny kinova farany an'ny WhatsApp Messenger ho an'ny takelaka.
Raha vao nametraka WhatsApp amin'ny Android, ny fomba fiasa dia mitovy amin'ny an'ny fitaovana hafa, nomeraon-telefaona iray, ampidiro ny kaody fampandehanana, ary afaka manomboka miresaka amin'ny mpifanerasera amintsika isika.
Amin'ny fotoana havaozy whatsapp Ho an'ny takelaka, ny fomba fanarahana anao dia tsy misy hafa amin'ny rindranasa hafa, na dia manana fampahalalana bebe kokoa aza ianao amin'ilay rohy izay navelanay fotsiny.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp amin'ny takelaka Wifi tsy misy SIM
Eto dia mipoitra ny olana amin'ireo mpampiasa izay tsy mampiasa karatra SIM amin'ny takelaka misy azy ireo izy ireo, izany hoe, tsy manana karatra hafa na laharana hafa hampiasana ny kaonty WhatsApp izy ireo, ka manana olana lehibe izahay. Eny, WhatsApp dia tsy fampiharana multiplatform, izany hoe afaka manana isa iray amin'ny fitaovana iray ihany isika. Safidy iray hafa ny mividy a takelaka sinoa miaraka amin'ny 4G ary omeo isa tsy manam-paharoa.
Ny safidy voalohany dia ny fampidinana ny iray amin'ireo rindranasa ireo avy amin'ny Google Play Store, izy ireo dia rindranasa izay tena mpanjifa WhatsApp Web clone, ary avelany hampiasa WhatsApp amin'ny takelaka misy anay izahay, amin'ny fomba mitovy amin'ny an'ny telefaoninay, miaraka amin'ireo fifandraisana misy azy sy ny nomeraon-telefaoninay. Ny zavatra tsara amin'ity safidy ity dia izy io no haingana indrindra sy mora ampiasaina, mila misintona ny rindranasa avy amin'ity rohy ity fotsiny ianao ary scan ny kaody Bidi avy amin'ny fizarana WhatsApp ao amin'ny finday avo lenta, tsy maintsy tsindrio ny "WhatsApp Web" ao ny smartphone mba hanombohana ny scanner.
Ny fomba hafa dia ampiasao mivantana ny WhatsApp Web, miditra amin'ny www.web.whatsapp.com izahay ary mameno ny kinova desktop an'ny mpizahatany Android mahazatra anay. Amin'izay fotoana izay dia manadihady ny kaody Bidi izahay ary hanomboka hiasa toa ny ataony amin'ny PC.
Ahoana ny fomba hananana WhatsApp amin'ny findainao sy ny takelaka miaraka aminao
Raha iray amin'ireo tonga mody ianao ary manadino tanteraka ny telefaona ary misafidy ilay takelaka hijerena ireo tambajotra sosialy, mailaka, mankafy andiany Netflix ... rehefa mandeha ny smartphone-nao satria nahazo WhatsApp ianao, tsy mila miarina mihazakazaka ianao hahitana hoe iza no manana sahisahy manelingelina anao amin'ny ora fitsaharana.
Na dia mbola manohy mieritreritra momba ny famoahana rindranasa marobe aza i WhatsApp, izay mamela ny fidirana amin'ny kaonty WhatsApp avy amin'ny tranokala na takelaka tsy misy ny finday finday avo lenta, ny hany vahaolana azontsika ampiasaina zahao WhatsApp avy amin'ny takelaka misy anay amin'ny alàlan'ny browser.
WhatsApp dia mamela antsika hiditra amin'ny WhatsApp amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny browser, raha mbola ny smartphone miaraka amin'ilay isa mifandraika dia alefaSatria miasa toy ny fitaratra izy io, izay rehetra voaray sy voavaly amin'ny finday avo lenta dia hita taratra amin'ny pejin-tranonkala ary ny mifamadika amin'izany.
Para manana WhatsApp amin'ny findainao sy ny takelakao tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto isika:
Voalohany indrindra, tsy maintsy manokatra ny navigateur izay ampiasaintsika amin'ny takelaka misy antsika sy miditra amin'ny web.whatsapp.com isika. Ampirisihina hampiasa Firefox, Chrome na Samsung Internet Browser isika raha tsy te hijaly amin'ny olana amin'ny fikirakirana.
Raha toa ka tsy aseho ny kinova an-tranonkala misy kaody QR, miditra amin'ny safidin'ny mpikaroka izahay ary mitady ny safidy Mangataha tranokala birao.
Manaraka izany dia raisinay ny finday avo lenta sy ny fidirana Menu> WhatsApp Web ary hoentina ny fakantsary. Eo ambanin'ny kaody QR dia hitantsika ny safidy voamarikao amin'ny alàlan'ny default. Tsy mila manafoana ny boaty ianao raha tsy mila mandalo ny fizotrany isaky ny te hiditra amin'ny WhatsApp amin'ny takelaka ianao.
Farany, tsy maintsy manondro ny fakantsary eo amin'ny efijery amin'ny takelaka isika amin'izay fantaro ny kaody QR fa ny chat rehetra dia aseho ary aseho amin'ny browser raha toa ka ny pejin-tranonkala amin'ny solosaina.
Raha vantany vao namboarintsika ny WhatsApp tamin'ny takelaka hahafahantsika mandray hafatra WhatsApp avy amin'ny finday avo lenta amin'ny takelaka, dia ny filamatra mamorona hitsin-dalana amin'ny birao ny takelaka misy antsika, hananana azy io foana ary tsy mila mitady amin'ny alàlan'ny birao fandefasana birao na rindrambaiko ao amin'ny takelaka misy antsika.
Mba hamoronana hitsin-dàlana mankany amin'ny tranonkala ampiasainay hampiasa ny WhatsApp amin'ny takelaka misy antsika dia tsy maintsy manindry ny menio safidin'ny mpikaroka isika ary mitady ny safidy Manampia hitsin-dalana mankany amin'ny pejy. Amin'izay fotoana izay dia hisy hitsin-dalana hanampy ny biraonao, ny hitsin-dàlana izay hanokatra ny navigateur default hiditra amin'ny kaonty WhatsApp toy ny hoe fampiharana izany.
Ity dingana ity tsy mila ataonao isaky ny mandeha izany te-hiditra amin'ny kinova WhatsApp amin'ny takelaka izahay, vao sambany. Lafin-javatra iray tsy maintsy raisintsika momba ity asa ity ny hoe raha manidy ny tranokalanay WhatsApp izahay dia manakatona ny fizarana tranonkala WhatsApp rehetra, ary hanafoana ny alàlana nomen'ilay mpitety tranonkala ny WhatsApp avelao ny fidirana amin'ny fitaovana hafa ankoatry ny finday avo lenta, noho izany tsy maintsy hamerina ny fizotrany izahay.